Uzenza njani ezona Hashtag zininzi zokwandisa umxholo wakho weYouTube-YTpals
Abantu abaninzi bacinga ukuba iindlela zokusebenzisa injini yokukhangela zinokusetyenziswa kuphela kumaphepha ewebhu. Nangona kunjalo, oko kukude nenyaniso, njengoko enjini yokukhangela noun ubuchule bunokusetyenziswa nakweliphi na iqonga. Iihashtag kuYouTube zisebenza njengento ebalulekileyo ekuphuculeni imizamo yokuphucula injini yokukhangela. Xa zisetyenziswa ngokufanelekileyo, ii-hashtag zinokunceda ukuqinisekisa ukuba umxholo wakho wevidiyo ubekwa phezulu kwiziphumo zokukhangela.
Kulo nyaka, uYouTube uphehlelele into entsha ebizwa ngokuba yi iphepha leziphumo zophendlo lwe-hashtag. Olu phawu lujolise ekuphuculeni ukufaneleka kweziphumo zokukhangela kubabukeli. Ngelixa abasebenzisi benokukhangela iividiyo eqongeni besebenzisa ii-hashtag ngaphambili, kwakhona, into entsha inika iziphumo ezithe ngqo. I-algorithm kaYouTube ayicacisi ngokucacileyo iziphumo zophendlo ezibonelelwa kwiphepha elitsha leziphumo zokukhangela kwi-hashtag. Ngolu hlaziyo, amajelo amaninzi aya kufumana ithuba lokufunyanwa eqongeni ukuba asebenzisa ii-hashtag ngokufanelekileyo. Ke ungazisebenzisa njani ii-hashtag ukwandisa umxholo wakho? Masingene ngaphakathi.
IiHashtag kuYouTube zinokuhlelwa ngokweendidi ezine ezahlukeneyo-
Ii-hashtag ezithile: Ezi ziquka ii-hashtag zegama elinye ezibonisa umxholo ophambili wevidiyo.
Ii-hashtag ezichazayo okanye ezidityanisiweyo: Ezi ziquka amagama amaninzi afana namagama angundoqo anomsila omde. Eyona ndlela ilungileyo yokufumana iithegi ezihlanganisiweyo zevidiyo yakho kukusebenzisa iziphumo ezicetyiswayo kwibha yokukhangela.
I-Generic hashtag: Ezi ziquka amabinzana okanye amagama achaza umxholo wevidiyo.
Upelo olugwenxa: Rhoqo, ababukeli banokungapeli kakuhle amagama xa bekhangela iividiyo. Unokubandakanya iimpazamo zopelo ekudaleni ii-hashtag ezintsha, ezinyusa amathuba akho okufunyanwa eqongeni.
Uzifaka njani ii-hashtag kwiividiyo zakho?
Ii-Hashtag ngokusisiseko ngamagama aphambili achazayo anokongezwa kwiividiyo zakho kwiYouTube ukonyusa ukubonakala komxholo wakho kwiziphumo zokukhangela zikaYouTube. Ivumela abasebenzisi ukuba bafumane iividiyo zakho ngokulula ngakumbi. Kubalulekile ukusebenzisa ezi hashtag ngokufanelekileyo ukwandisa ukufikelela kwakho eqongeni. I-algorithm yeYouTube isebenzisa ii-hashtag ukunika ukuhlelwa okufanelekileyo kunye nokuhlelwa kweevidiyo zakho. Ukusebenzisa ii-hashtag ngokufanelekileyo kuye kwabaluleka ngakumbi ngephepha elitsha leziphumo zokukhangela i-hashtag.
Kukho iindlela ezintathu ezahlukeneyo zongezwa ii-hashtag kuYouTube -
Ngaphezu kwesihloko: Ii-hashtag ezintathu zokuqala ezifakwe kwinkcazo yevidiyo ziboniswe apha
Kwisihloko: Oku kunokusetyenziswa endaweni yokubonisa ii-hashtag ngaphezulu kwesihloko.
I-app yeselula yeYouTube ikwakuvumela ukuba wongeze iithegi zendawo kwiividiyo eziboniswe ngaphezulu kwesihloko sevidiyo. Ezi thegi zendawo azinaluphawu lwe-hash (#).
Nangona kungekho mda kwinani lee-hashtag ezinokongezwa kuyo nayiphi na ividiyo, kukho izithintelo kubalinganiswa. Ubuninzi bamagama angama-30 angasetyenziswa kwithegi nganye. Indawo yombhalo kwinkcazo yevidiyo yamkela malunga nama-500 oonobumba, kuquka abahluli.
Iingcebiso ezixabisekileyo zokubandakanya ii-hashtag kwiividiyo zakho
1. Qwalasela eli lungiselelo: Xa usongeza ii-hashtag ukwandisa umxholo wakho, kubalulekile ukubeka ii-hashtag eziphambili kwasekuqaleni. Oku kuvumela ialgorithm yeYouTube ukuba ifumane kwaye ihlele ividiyo yakho ngokulula ngakumbi.
2. Ukongeza ii-hashtag ezininzi kakhulu: Kuya kufuneka uyeke ukongeza ii-hashtag ezininzi kwividiyo. Njengoko iba njalo, iyanceda ekwandiseni ukubonakala kweevidiyo zakho kubabukeli.
3. Yenza iithegi ezihlala zikhona: Unokuzichaza iithegi ezingagqibekanga ezongeziweyo kuzo zonke iividiyo zakho. Iithegi ezihlala zikhona zinokunceda ukwandisa ukubonakala komxholo wakho kwiziphumo zokukhangela.
4. Sebenzisa isicwangcisi samagama angundoqo: Uninzi lwezixhobo zokucwangcisa amagama angundoqo zinokukunceda ukhangele ii-hashtag ezihamba phambili. Unokusebenzisa ezi zixhobo ukufumana uluhlu olulungileyo lwee-hashtag ezisebenzayo.
Ukufumana iimbono ezingakumbi kwiYouTube kwaye uqinisekise ukukhula kwetshaneli yakho yeYouTube, kubalulekile ukusebenzisa iihashtag ngokufanelekileyo. Ngokusebenzisa ezi ngcebiso zikhankanywe ngasentla, uya kuwanyusa amathuba akho okuba phezulu kwiziphumo zophando. Unokunceda ekukhuleni kwetshaneli yakho ngokusebenzisa iintlobo ngeentlobo zeenkonzo zeYouTube ezinikezelwa yiYTpals. Ezi nkonzo zinokukubonelela ukujonga kwi-YouTube, izinto ezithandwayo, kunye nababhalisi, ezinokuthi zilungele ukuqalisa ukukhula kwetshaneli entsha.
YTpals iqinisekisa ukhuseleko oluyi-100% ngazo zonke iinkonzo zikaYouTube, ukuze abathengi bangazihluphi malunga nemfihlo yabo. Inkonzo yethu yabathengi engama-24/7 ikwalapha ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba unayo. Ukufumana naziphi na iinkonzo zethu zeprimiyamu zikaYouTube, qhagamshelana nathi namhlanje!
Uzenza njani ezona Hashtag zininzi ukuze wongeze umxholo wakho weYouTube ngababhali beYTpals, 14 January 2022
Uyenza njani eyona Vidiyo iYouTube yeVenkile enokuthengwa?
I-YouTube yinto enkulu kule mihla yanamhlanje apho intengiso yedijithali nakwimithombo yeendaba zentlalo ziqhuba kakuhle kakhulu kwindawo yentengiso yohlobo. Iqonga levidiyo elinabanikazi bakaGoogle linabasebenzisi abangaphezulu kwe-2 yezigidigidi abasebenza inyanga nenyanga kwihlabathi-into ethi…
Nantsi into ekufuneka uyazi ngeeVidiyo eziCetyiswayo kwiYouTube
Nanini na xa sicinga ngokusasaza ividiyo yomculo okanye isifundo, i-YouTube ngokungathandabuzekiyo yinto yokuqala ethi qatha engqondweni. Kutheni le nto kungafanelekanga? Emva kwayo yonke loo nto, usasazo lwevidiyo lufezekisile izinto ezintle ukusukela…
Abaphembeleli beYouTube banokunceda njani iimveliso zenze ngcono i-ROI yabo?
Ukuthengisa ngebrand namhlanje kuye kwathetha okungaphezulu kokulandela nje iindlela zokuthengisa zakwantu. Intengiso yemithombo yeendaba kwezentlalo iye yatshintsha umdlalo kumashishini namhlanje, ibanika ukufikelela kubabukeli ngokubanzi…